विशाल अनलाइन खेल - बीस-पहिलो शताब्दीको मनोरञ्जन उद्योग को एक पहिचान हो। अहिले लाखौं मानिसहरू परियोजनाहरू विशेष यस उद्देश्यका लागि डिजाइन मा एक लक्ष्य हासिल गर्न प्रत्येक अन्य वा सँगै विरुद्ध प्रतिस्पर्धा।
विधा सबैभन्दा अनलाइन साइटहरु को क्षेत्र बाहिर निस्कन योगदान रूपमा आन्दोलन, एक बहु भूमिका-निभाउने खेलहरू संग थाले। को शूटर लागि जाँदा, सबै कुरा धेरै गाह्रो छ - विधा बहु-प्रयोगकर्ता मोड गर्ने क्षमता संग एक-प्रयोगकर्ताको रूपमा कथित छ। यो तपाईं एकल-खेलाडी अभियान प्ले, र साथी वा जस्तै-दिमाग मान्छे आमन्त्रण गर्न र चाहेको यदि विशिष्ट नक्सा र स्थानहरू तिनीहरूलाई खेल्न, तपाईंको आफ्नै सर्भर सिर्जना गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने हो।
भाग्य - यो छैन MMO शूटर मोड मा पर्यो जो पहिलो खेल छ, तर यो परियोजना भनेर विकासकर्ताहरूले मात्र एकल-खेलाडी खेल ध्यान छैन सुनिश्चित गर्न, र थप केहि गम्भीर गति बन्न सक्नुहुन्छ। तर भाग्य के हो? सिस्टम आवश्यकताहरु, कथा, खेल मेकानिक्स के? कम्प्युटरको कन्फिगरेसनमा कम्तीमा थप विस्तार देख लायक छ।
विचार गर्नु अघि, के भाग्य सिस्टम आवश्यकताहरु, यो आवश्यक सम्पूर्ण रूपमा खेल वर्णन गर्न छ - के यो के अवसर गर्छ त छ, र। यो सबै पछि खेल चरणको एक वा अर्को परियोजना छनोट वा छैन निर्धारण के छ। त्यसैले, भाग्य - यो MMO-शूटर आरपीजी तत्व संग। यी घटक, को MMO विकास खण्डमा सार्न आवश्यक तिनीहरूले वर्ण विकास प्रदान गर्न, र यो बिना विशाल बहु ब्रह्माण्ड मा खेल्न कुनै अर्थमा छ देखि।
विकासकर्ता अर्को आफ्नो परियोजना प्रस्तुत गर्न प्रयास गरेका छन्, विधा लागि आफ्नै नाम आविष्कार, तर त्यहाँ छ, त्यसैले, असफल परियोजना गर्न थप आकर्षण दिन अन्त मा अझै पनि सबै थाहा छ। तर पनि यो बिना यो राम्रो पर्याप्त, यो उपलब्ध चार ग्रह, स्थानहरू, सुरुचिपूर्ण मेकानिक्स, रोमाञ्चक षड्यन्त्र र रोचक वर्ण विकास एक अधिकता विभाजित एउटा एकदम ठूलो खेल संसार प्रदान गर्दछ रूपमा छ।
आउनै लागेको खतरा बाट धरती रक्षा गर्न सक्रिय भएको एक प्राणी - तपाईं अभिभावक को भूमिका मा लिन। वास्तवमा, सबै अन्य वर्ण ठीक त्यही भूमिका हो। एक परियोजना जानाजानी पूर्णतया तयार छैन द्वारा कार्यान्वयन - तर, म यो भाग्य भन्ने टिप्पण लायक छ पक्का छु। यो समय, केही पक्षहरू थप्नेछ खेल, यो सुधार हुनेछ र ल्याएको प्रयोगकर्ता अझ राम्रो प्रकाश अघि हो। तर तपाईं एक भाग्य प्ले गर्न आवश्यक हुनेछ? सिस्टम आवश्यकताहरु सजग छैनन्, तर खुसी मालिकहरूले सबैभन्दा शक्तिशाली कम्प्युटर छैनन्।
खेल लागि प्रोसेसर को भाग्य मा
तपाईं प्रोसेसर सुरु गर्नुपर्छ - छ कि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण एक घटक, तर एकै समयमा, धेरै खेल प्रदर्शन निर्धारण गर्छ। यो अनुच्छेद मा भाग्य सिस्टम आवश्यकताहरु पहिले नै एकदम धेरै छ जो 2.6 gigahertz, गठन। तर यो केवल न्यूनतम आवश्यकताहरू छ भनेर याद गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो कम्प्युटर रूपमा सजिलै सकेसम्म गए मा प्ले गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले 3.2 GHz गर्न प्रोसेसर प्राप्त गर्न आवश्यक छ। मात्र बहु मोडमा चल्छ एक खेल, कि जसको अर्थ सानो सिस्टम आवश्यकताहरु यो अपेक्षित र हुनु हुँदैन भन्ने इन्टरनेट, जोडिएको छ - यो भाग्य भन्ने सम्झना गर्नुपर्छ।
सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गर्दा अर्को नवीनता छनौट मनमा राख्न सधैं छ - स्मृति छ। भाग्य - यस सन्दर्भमा खेल एकदम मांग छ। चार गिगाबाइट को स्तर मा पनि न्यूनतम चिन्ह। तर तपाईं अधिकतम प्रदर्शन हासिल गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं पट्टी कम्तिमा थप एक स्मृति बढी दुई गिगाबाइट गर्न तिनीहरूलाई अन्ततः छ भए किन्न गर्नुपर्छ। हुनत, थाहा छैन धेरै छ रूपमा, राम, यो आवश्यक छ भन्दा बढि छ त्यसैले यदि, तपाईं मात्र यो लाभ हुनेछ - PC मा भाग्य धेरै राम्रो काम गर्नेछ। तर, कुनै पनि अन्य खेल जस्तै।
पछिल्लो महत्त्वपूर्ण तत्त्व आफ्नो कम्प्युटर को प्रदर्शन निर्धारण मा एक प्रमुख भूमिका खेल्छ भन्ने - यो कार्ड। PC मा भाग्य एक गिगाबाइट एक भिडियो स्मृति गर्न आवश्यक हुनेछ। सबैभन्दा गम्भीर आवश्यकताहरु छैन। तैपनि यो स्क्रिनमा गेमप्लेको म्यापिङ कुनै पनि सम्भव कमी जोगिन, दुई गिगाबाइट छ सिफारिस गरिएको छ। तर यो भाग्य लागि आधिकारिक सिस्टम आवश्यकताहरु मा सूचीबद्ध छन् भनेर सबै मापदण्डहरु छैन। मा पालन को अन्य पक्षलाई अवलोकन।
त्यसैले, तपाईं तीन मुख्य मापदण्डहरु तुलना गर्न सकेको र उपयुक्त पाइने कम्प्युटर तपाईं यसलाई भाग्य चलाउन सकून् यदि छन्। तर त्यहाँ अन्य पक्षहरू जस्तै सञ्चालन प्रणाली, डिस्क मा ठाउँ खाली, र DirectX को संस्करण हो। ओएस लागि, यो कम्तिमा7Windows गर्न सिफारिस गरिएको छ, तर तपाईं चाहनुहुन्छ भने तपाईं Windows Vista मा खेल सञ्चालन गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। नयाँ वस्तुहरू स्थापना गर्नु अघि हार्ड ड्राइभमा तपाईं ठाउँ खाली कम्तिमा बीस गिगाबाइट छ गर्न आवश्यक छ। खैर, DirectX कम्तिमा दशौं संस्करण हुनुपर्छ। यसलाई आफ्नो भिडियो कार्ड एघारौँ समर्थन मनमोहक छ।
एक छाडा अवधारणा - भाग्य जारी मिति गर्न। आधिकारिक, खेल सेप्टेम्बर 2014 मा नवौं प्रस्तुत भएको थियो, तर विकासकर्ताहरूले लुकाउन छैन, र कडा यो परियोजना को अन्तिम संस्करण छैन भनेर संकेत - अपेक्षित सुधार, फिक्स, नयाँ सामग्री, र यति मा। अन्तिम जारी को मिति अब कठिन निर्दिष्ट गर्न हो, त्यसैले यसलाई सेप्टेम्बर को नवौं छ खेल जन्म भाग्य थियो कल्पित छ। तर, आकर्षक प्रक्रिया बाट पूर्ण खुशी अनुभव गर्न, तपाईं विकासकर्ताहरूले सबै प्रतिज्ञाहरू पूरा नभएसम्म प्रतिक्षा हुनेछ। अर्को विकल्प - जबकि अपेक्षाकृत "कच्चा", तर एक रोमाञ्चक परियोजना रमाइलो गर्न।
कहाँ र कसरी Pokemon फेला पार्न?
कसरी साथीहरूसँग परियोजना Zomboid नेटवर्क खेल्न?
के भिटामिन बी समावेश - हाम्रो स्वास्थ्य को लागि खाना
कसरी गत महिना मा निर्माण गर्न
पहिलो, सहायता र नतिजा: तपाईं सिरका पिउन भने के हुन्छ
कति मार्च दिनहरुमा - के तपाईं पक्का लागि कसरी थाहा छ?